FAMPAHALALANA SY SARY CANIS PANTHER - ALIKA
Fampahalalana sy sary Canis Panther
Sary natolotry ny Lori Berg
alika kely retriever volamena izay mijanona kely
Ny Canis Panther dia manana hoza-tratra sy valanoranom-boaloboka be. Voakapa ny sofiny ary voahidy ny rambony, ary nesorina ireo dewclaw any aoriana. Fohy ny volony. Ny loko dia misy ny mainty, sôkôla, volondavenona / volomaso, manga / volondavenona. Canis Panthers dia miloko miloko.
Ny Canis Panther dia biby mora tohina sy be fitiavana amin'ny fonosam-pianakaviany. Izy io dia tena manan-tsaina, mora zarina ary tena mahatoky. Miavaka amin'ny fankatoavana, ny hakingana ary ny fiarovana azy manokana ary alika mpiambina tena tsara. Tena miaro ny faritaniny izy ary tokony mifanerasera tsara , tsara kokoa raha tanora miaraka amin'ny alika sy olona, ​​indrindra amin'ny ankizy, satria mitandrina tsara ny olon-tsy fantatra ny karazany, na dia tena sariaka amin'ireo fantany aza izy. Mba hitazomana tsara ny Canis Panther dia tsy maintsy hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny iray manontolo miara-miasa ny fonosana eo ambany mpitondra tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Haavony: Lehilahy 27 - 30 santimetatra (68 - 77 cm) Vavy: 24 - 27 santimetatra (62 - 68 cm)
Milanja: Lehilahy 120 - 140 pounds (54 - 63 kg) Vehivavy 85 - 105 pounds (38 - 48 kg)
Tsy misy fantatra.
Ity karazana ity dia tsy maintsy tazomina ao anatiny noho ny volony fohy.
Ity karazana ity dia tsy maintsy manana faritra midadasika hipetrahana, ary raisina a isan'andro, l ong mandeha .
10-11 taona eo ho eo
Tsy mila fitsaboana manokana.
Ny Canis Panther dia novolavolaina tany Etazonia tamin'ny taona 1970 avy Atoa Cleotha 'Scorpio' Jones, Andriamatoa Michael Stratten, ary Andriamatoa Lucas Lopez nampiasa ny mainty Great Dane , mainty Labrador , Doberman Pinscher , ary ny Staffordshire Terrier . Androany ny Canis Panther dia miteraka fahamarinana. Misy ny ra mandriaka sy ny tetirazan-taranaka maro.
husky poodle afangaro tanteraka
PPDA = Fikambanan'ny alika fiarovana manokana
pitbull afangaro amin'ny alika kely
pit bull terrier mix alika
alika miteraka hahita soa izay miara-
sarina bulldog amerikana